ကိုယ်တိုင်ရေးဖတ်စာ: လူပျိုကြီးဖြစ်ခါစ ဒုက္ခများ
အင်း... ခေါင်းစဉ်ကြည့်တာနဲ့တင် ဘာရေးတော့မယ်ဆိုတာ ရိပ်မိလောက်ရောပေါ့နော့်။ ဘ၀ကံခေလေသူမို့ ရုပ်ရည်လေးသနားကမားရှိတာတောင် မစွံ့နိုင်ရှာသေးသူလေးပါခင်ဗျာ။ တကယ်ပါ၊ အရင်ကတည်းက ကလေးလိုလိုခွေးလိုလို မလောက်လေးမလောက်စား ဘ၀ကို ဖြတ်သန်းနေတတ်သူဆိုလေတော့ လူကြီးတို့ဘာသာဘာဝ ချစ်ကြင်ထိမ်းမြားလက်ထပ်... အိမ်ထောင်တည်သားမွေးဆိုတာ ခေါင်းထဲတောင် ထည့်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလေ။ မေးကြပါလိမ့်မယ်၊ ဒါဆို ရည်းစားစကားတွေ ပြောတုန်းက အတည်မကြံပဲ အပျော်ကြံတာလားပေါ့။ မဟုတ်ရေးချ မဟုတ်ရပါခင်ဗျ။ အဲဒီအချိန် အဲဒီတုန်း(တွေ)ကတော့ ချစ်ချစ်ချစ်ချစ်နဲ့ ဓာတ်ဆီဆိုင်ရှေ့ဖြတ်မလျှောက်ရဲလောက်အောင် ဒိန်းတလိန်းနတ်မီးတွေ ဟုန်းဟုန်းတောက်နေခဲ့သကိုး။
ဆိုတော့ကာ... ခေါင်းစဉ်ကို ပြန်ကောက်ပါဦးမယ်။ အသက်ကလေးကလည်း နှစ်ဆယ်ကျော် အစိတ်ပိုင်းထဲ ဝင်လာပြီးမဟုတ်လား။ ကိုရွာသားတို့ ကိုလင်းဒီပတို့အမှူးပြုတဲ့ လူပျိုသိုးအုပ်စုကြီးထဲကို ဝင်မJoinလောက်သေးပေမယ့် အများအမြင်မတော့ လူပျိုကြီးတပိုင်းဖြစ်လာပြီပေါ့လေ။ တကယ်ပါ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လူပျိုကြီးနေနေသာသာ လူပျိုလေးလို့တောင် သတ်မှတ်ချင်သေးတာမဟုတ်ဘူးရယ်။ ခုထိ ပေါ့ပေါ့နေ ပေါ့ပေါ့စားလို့ ၁၀တန်းအောင်ခါစကောင်လေးတစ်ယောက်လိုပဲ ခံစားနေရတုန်းပဲလေ။ အရင်ကဆို အိမ်ထောင်ကျသွားတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်များလာရင် ကျွန်တော်တို့အုပ်လိုက် ဝိုင်းတွယ်နေကျပေါ့။ ခုတော့ ရွာထဲမှာလည်း ဂျိုထောင်မရှိသလောက်ဖြစ်ကုန်ပါပြီလေ။
ကိုယ့်ဖာသာမသတ်မှတ်ချင်သေးပေမယ့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာကြီးက သတ်မှတ်ပေးလိုက်တော့လည်း ခံယုံပဲပေါ့။ အိမ်ထောင်ကျ ရည်းစားရတာ ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာတော့ တခါမှမကြုံဘူးလို့ ဘာမှပြောနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ တခါတလေ အချစ်ဝတ္ထုလေးရေးဖို့တောင် ကုန်ကြမ်းစိတ်ကူး ဖမ်းရတာမဟုတ်။ အဲ.. လူပျိုကြီးဖြစ်ရတဲ့ ဒုက္ခတွေကိုတော့ တော်တော်ပြောနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အကြီးဆုံးနဲ့ ခဏခဏ ကသိကအောက်ဖြစ်ရတာက ရည်းစားမရသေးဘူးလားလို့ အမေးခံရတာပါပဲ။ ရည်းစားမထားဖူးတာကိုပဲ လူဖြစ်ရှုံးသလိုလို၊ တခုခုပဲ ချို့ယွင်းနေသလိုလို အထင်ခံရသဗျို့။ ခဏခဏအမေးခံရတော့လည်း ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်တောင် သံသယ ဝင်ဝင်လာလို့ မနည်းအားတင်းထားရသဗျာ။
ဒီထဲမှာ အောင်သွယ်လာလုပ်ပေးသူတွေလည်း ရှိသဗျ။ ကိုကြီးရေ ဒီကောင်မလေးတော့ လွတ်နေသေးတယ်၊ ဖမ်းထားလိုက်.. ရော့ သူ့အကောင့်ဆိုတဲ့ပို့လုံးတွေ၊ သူငယ်ချင်းအချင်းချင်းပဲကွာ လွတ်နေသူချင်း ဖိနပ်တိုက်ဆေးနဲ့ သွားပွတ်တံ တွဲရောင်းလဲ ဖြစ်တာပါပဲဆိုတဲ့ချွန်လုံးတွေ၊ အများကြီးပေါ့လေ။ တခြားလူတွေတော့မသိဘူး။ ကျွန်တော့် အဲလိုလာလုပ်ရင်တော့ ကုသိုလ်လုပ်တယ်လို့ပဲ သဘောထားပါတယ်။ နားရှုပ်သွားလားမသိဘူး။ ဒီလိုလေဗျာ။ ကျောင်းမှာကတည်းက ဟိုကောင်မလေး မိုက်သဟဆို နောက်နေ့ ခြင်းဆွဲပေးတဲ့လူနဲ့၊ ဒီတယောက်တော့ အေးအေးလေးဟေ့ဆို သတင်းစာထဲ စေ့စပ်ကြောင်းလမ်းတာ တလအတွင်းပါလာတာတို့ ဖြစ်ခဲ့တာကိုး။ (အံမယ်... မယုံမရှိနဲ့ ခုထိမှန်တုန်း ) ဖိုးသင်္ကြန်ကြီး ချိန်ပြန်ပဟေ့ဆို ဝိုင်းအုံလိုက်လိုက်ကြတာများဗျာ။ ကျွန်တော့်မှာတော့ ထိုးလိုက်တဲ့လက်ညိုးရာတွေသာ အဖတ်တင်တယ်။ နံမည်ကတော့ ကြီးပြီးရင်းကြီးရင်းပေါ့လေ။ မတော် လမ်းမှာပြန်တွေ့ရင်တောင် အဲဒါ မင်းချိန်ခဲ့တဲ့ တယောက်လေကွာတဲ့... ကြည့်၊ ဖြစ်ပုံများပြောပါတယ်။
နောက်တခုက အထင်မှားခံရတာပါ။ ကိုယ့်ဖာသာ အကြောင်းတခုခုနဲ့ မိန်းကလေးတယောက်ယောက်ကို မိတ်ဖွဲ့မိရင်တောင် ဒီကောင်ကြီးတော့ လုံးပြီဟေ့လို့ ထင်ကြပြန်ရော။ ပတ်ဝန်းကျင်က ထင်ယုံဆိုတော်သေး။ ကာယကံရှင်ကပါ တဖက်သက်ကြီးစိတ်ကူးတွေယဉ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ ဆက်ဆံရေးတွေက ကမောက်ကမတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့။ ဒါမျိုးတွေဆို ဘဝတူ အပျိုကြီးတွေက ပိုများတယ်။ သူတို့နဲ့စကားပြောရင် သတိထားနေရတယ်။ ခပ်ငယ်ငယ်လေးတွေကျပြန်တော့လည်း ဘေးက ဝိုင်းနောက်တာနဲ့ ကြောက်ကန် ကန်ကုန်ကြရော။ ဒါပဲလားဆိုတော့ မဟုတ်သေးဘူး။ မိန်းကလေးတွေနဲ့ အပေါင်းအသင်းမလုပ်ဘူးကွာ၊ စိတ်တူကိုယ်တူ ဘော်ဒါတွေနဲ့ပဲ ဟေးလားဟားလား နေမယ်ဆိုပြန်တော့လည်း Gay ဖြစ်သွားပြီလို့ သရိုးသရီလုပ်ကြပြန်ရော။ အဲလောက်ဆိုးတဲ့ ဘဝပါခင်ဗျာ။
ရှိပါသေးတယ်။ သာမန်လူတစ်ယောက် ပြုမူလှုပ်ရှားပုံနဲ့ လူပျိုကြီးလို့ အသတ်မှတ်ခံလိုက်ရသူ လှုပ်ရှားပုံ တန်ဖိုးဖြတ်ပုံချင်းလည်း မတူတော့ဘူးဗျ။ ကိုယ့်အဖေအမေဖို့ရှာတာတောင် ကျိတ်စုနေတာတဲ့။ ကိုယ့်ဖာသာမူးပြန်တော့လည်း အဆက်ဟောင်းကို သတိရလို့တဲ့။ သီချင်းလေးညည်းပြန်တော့ တခုခုတော့ တခုခုပဲတဲ့။ ပိုသီပတ်သီနေတော့ လူပျိုသိုးကြီးမို့ ဒီလို၊ သန့်သန့်ပြန့်ပြန့်နေပြန်တော့ လမ်းကြောင်းရှာပြန်ပြီ.. တဲ့။
မင်းတို့အပြောတော့ မခံဘူးဟေ့၊ ထမင်းထုပ်ထမ်းပြီးရှာမယ်ဆိုရအောင်ကလည်း နဖူးပေါ်က ချွန်းရာတွေကြောင့် ဗျည်းနွဲ့မြင် သတ်ချင်နေတော့တာနဲ့ပဲ အဆင်ကိုမပြေပါဘူးလေ။ လူပျိုကြီးဖြစ်တာ အားငယ်နေတာမဟုတ်ပါ။ လူတွေထဲမှာ ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ လူလိုနေ နေသူတွေသာ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ များသောအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ဟာ အများထင်ကြသလို လူ့မလွန်မသားတွေ မဟုတ်ရပါ။ ခံဖူးတဲ့သင်ခန်းစာတွေကြောင့် သို့မဟုတ် တွေးကြောက်မိတဲ့ ထောင်အချုပ်တွေကြောင့် သို့မဟုတ် ဖူးစာမှင်ရေခမ်းနေကြတာကြောင့်သာ အေးအေးဆေးဆေး နေနေကြသေးသူတွေပါ။ ဒီစာတွေရေးနေလို့ စာဖတ်သူတို့ ကျွန်တော်တို့လူသိုက်ကို သနားလာမယ်လို့ မမျှော်လင့်ပါဘူး။ စာနာပေးရင်ပဲ ကျေနပ်ပါပြီ။ နောက်နောင်များ လူပျိုကြီးများတွေ့ရင် ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လွတ်လပ်သော နေထိုင်မှုကြီးများကို မနှောင့်ယှက်ကြပါနဲ့၊ မယိုးစွတ်ကြပါနဲ့လို့ တောင်းပန်ရင်းနဲ့ပဲ....
Labels: ပေါက်ကရလေးဆယ်, ပြောစရာလေးတွေ
ဒါဖတ်ပြီးတော့ မင်းလူရဲ့  အော်ဆွေးထဲက လူပျိုကြီးတွေအကြောင်းတွေ သတိရတယ်.. လူပျိုကြီးတွေက အလိုက်လည်း မသိတတ်ဘူးတဲ့.. :)
ကျွန်တော့လည်း ပြန်သနားဦးဗျ.. အဲလိုကြီးကို ဖြစ်နေတာ အခုပဲ သုံးဆယ် ကျော်ချင်နေသလိုကြီး.. ဘယ်သူမေးမေး အသက်မဖြေတော့ဘူး.. ရှင်းတယ်
နောက်ထပ်ဆိုးတာတစ်ခုက ဗလွတ်ရွှတ်တွတ် နေတတ်ပြောတတ်တော့ အသည်းစကားပြောကြားရင်တောင် အပြောခံရသူက ရည်းစားစကားပြောဖို့လာလေ့ကျင့်နေတယ် ထင်တာ..
ဟားဟား။။။ ဖတ်လို့ကောင်းတယ် ။
နောက်ထပ်အများကြီး ဒါမျိုးတွေ ကြုံရဦးမှာ ညီလေးရေ.....။
ဘာမှ လုပ်မနေနဲ့။ တွေ့တာ တစ်ယောက် ဆွဲစိပစ်လိုက်။ အဆင်မပြေတော့လည်း နောက်တစ်ယောက်ပေါ့။ :D
ဟိုတလောက မသိုးမသန့်ကြားလိုက်တာလေးတွေ ပါသွားပြန်ပြီလား ပိုးဟပ်ရေ .. :P
တနေ့ တော့ ဖြစ်လာမှာပါ ... စိုးပိုင်သီချင်းနားထောင်ရင်းနဲ့ ဖတ်သွားတာပါး)
လူပျိုကြီး တကယ်လုပ်မှာလား ..
လူပျိုကြီးပဲ ဖြစ်တော့မယ် ..
ဘယ်သူဆိုတာ လဲတော့ မမှတ်မိတော့ဘူး ..
သီချင်းးး ... သီချင်းး .... :D
ခု ၂၀ ကျော်ငယ်သေးတယ် ..
ဘ၀ ဆိုတာ ၃၀ မှ စတာ .. ;)))
ညံ့ တာကွာ XP
ဒုက္ခပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင်ထဲမှာ ဒီဒုက္ခလဲ ပါသကို ကွဲ့........။
ကတောက်.. လူပျိုကြီးညည်းချင်းဆိုတာ ဒါမျိုးထင်ပါ့ကွာ.. ခုမှပဲ အကြောင်းစုံကိုသိရတော့တယ်.. နောက်ဆုံးတော့လည်း လူပျိုကြီးနဲ့ လူအိုကြီး နှစ်ခုပဲရှိတာပါကွာ.. စကားမစပ်.. ရည်းစားမရတာ ဘုန်းကံကောင်းနေလို့ပဲကွ..
ဆောင်းနှင်းရွက် ရေးမှပဲ ဘဝ ဆိုတာ ၃၀ စတာတဲ့ အိုင် သိတာတော့ ၄၀ပါ .သူတို့ခေတ်ကျမှများ ပြောင်းသွားလေသလား...
ဟိုနေ့က မွေးနေ့မှာ ရိုက်တဲ့ အင်ကျီ မပါတဲ့ ပုံလေးနဲ့ တွဲ တင်ရမှာ....
ကို ZT တုိ့ဘာသံမှ မကြားရပါဘူး......
ဘာဖြစ်ဖြစ်ခုချိန်မှာ လူပျိုကြီး အပျိုကြီးတွေကို လေးစားမိတာတော့အမှန်ပဲ တော်တော်ခံနိုင်ရည်ရှိကြလို့ ပါပဲ။
သြော်..ကြားရတာ နားဝမှာ မသက်သာပါလားကွယ်.....
တကယ်တော့ ကိုယ်တွေ့သမျှမောင်ငယ် ညီမငယ်လေးတွေက စိတ်ကောင်းရှိကြတဲ့သူလေးတွေပါ။
မစွံကြလေတော့ စွံစေချင်သား....း))))
ခက်တာက ကိုယ်က အောင်သွယ်ရတာ ၀ါသနာမပါ။အင်း..ခုတော့..
ဂျပန်တီဗီမှာလို အစီအစဉ် တစ်ခု လုပ်ပေးရတော့မယ်ထင်ရဲ့...
နန်းဝါ၀ါမောင် ဖူးစာရှင်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီ ထောင်လိုက်ရမလား...မမြှောက်ပေးကြနဲ့နော်.တကယ်လုပ်ပေးလိုက်မယ်..း))))
လူပျိုကြီးဖြစ်ကာစ ဆိုတော့ နေသားမကျသေးဘူးထင်ပ ..
နောက်တော့ ....အင်း .နေသားကျသွားမှာပါလေ :P
ခုအသက်သုံးဆယ် ပြည့်သွားပေမယ့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လူပျိုကြီး လို့ တခါမှ မခံစားဖူးသေးဘူး။
ဒီလို အတွေ့အကြုံနဲ့လဲ မဆုံဖူးဘူး။
ကိုယ့်အသက်အတိုင်းအတာနဲ့ ဆိုရင် ခုလို လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေနေရသေးတာကို သဘောကျတယ်။
မိန်းမရပြီးသွားတဲ့ အခါကျရင် ဒီလို အခွင့်အရေးမျိုး နှစ်ခါပြန်မရဘူးမှတ်.
မိန်းမနဲ့ ကွဲသွားပြီးမှ ထပ်ရှာရင်လဲ လူပျို ဆိုတဲ့သိက္ခာတခု ကုန်သွားပြီး။
အိမ်ထောင်သည်မို့ လက်သွက်တယ်.. ဘာတယ်..ညာတယ်... ပေါ့.
လွတ်လပ်ခြင်းရဲ့ အရသာကို ဒီစိတ်ကူးအတွေ့အကြုံတွေ အတွက်နဲ့တော့ မလဲနိုင်ပါဘူး.
ခုထိတော့ စိတ်ထဲမှာ နုပျိုနေဆဲ.. လိုချင်တာကို ရနေဆဲလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်နေဆဲ....
ဖိုးသင်္ကြန်ရေ........ကိုယ်တွေ ညည်းချင်းထုတ်ဖို့ ချန်ထား
လူပျိုကြီးဖြစ်ဖြစ် အပျိုကြီးဖြစ်ဖြစ် လူတွေက ခလုတ်တိုက်ကြတာမလွတ်ပါဘူး။ ကိုယ်ယုံကြည်ရာ ရည်မှန်းချက်ကို ဆွဲကိုင်ပြီး ကိုယ်လမ်းကိုယ်လျှောက်ပါလို့သာ
အိမ်း..ဖိုးသင်္ကြန်ရေးတာတွေ မှန်နေတော့က.. ဘာပြောရမှန်းတောင်မသိတော့ဘူး...း)